Amaqeqebana kwawombusazwe abulala izwe | Bayede News
Home/ Imibono/Amaqeqebana kwawombusazwe abulala izwe
nguThemba Xolani Zikhali
AMAQEMBU ezombusazwe akhungethwe yingwadla yesiko lokuhlukana ngokwamaqeqebana ngaphakathi ezinhlakeni,lokhu okuthiwa ngamakhempu.
Ngiyafisa siyibukele eduze imbangela yalesi simo,kunokuthi siyishalazele,kumbe siyithathe njengento eyihlazo ukuxoxa ngayo,ikakhulukazi ngoba isiphithisa ngamakhanda. Mhlawumbe kungaba kuhle nxa singabukisana ukuthi ngakube bukhona yini ubuhle, kumbe ububi obuqhamuka naleli siko embusazweni wakithi, hleze sisale sesibheka nokuthi kambe umkhombandlela ungathatha liphi igxathu kulolu daba.
Kuyoba kuhle lesi sihloko sisibheke ngokungachemi, njengoba kubukeka kuludaba olubucayi futhi olungathunuka abantu abaningi ngezindlela ezingafani.
Asiqaleni ngokuvuma ukuthi abantu ngokwendalo bahlukene ngezindlela eziningi. Kungaba phakathi kokunye yizinto abazithandayo, kanjalo nabazinyanyayo, ngokwempilo nangemikhuba yabo.
Okuhle wukuthi,abantu bagcina ngokuhlangana emazingeni amaningi empilo, bayajwayelana, bafundisane imikhuba ehlukeneyo, emibi nemihle
Ngenhlahla enkulu izinhlangano zombusazwe ziba nemigomo elawula inqubo yokuziphatha kanye nenkambiso yokwenza izinto. Izinkinga zisuka ngesikhathi sekumele kulandelwe izimiso zenhlangano ngoba kubakhona idlanzana elidudana ngokufohla, liphule imithetho ngenhloso yokufeza inkohlakalo ngobuqili, nangokushekelela izimo ezithile.
Le nto iyisihlava esibi esifana nesikhuvethe nxa leli qeqebana labantu selakha umshungo, maqede bese liyanda ngokufeza izinjongo ngaphandle kokuthobela imigudu ebekiwe, sekuyothi labo abanonembeza wokulalela kanye nokukhalimeka bese bephila ngaphansi kwengcindezelo yezaphulamthetho.
Isimo esigcina ngokugqama kuba yileso sokulwela ubulungiswa ngokuqophisana nezigilamkhuba, bese kuvela kumbe kuhlaluke leli qoqwana lemishungu, yamakhempu.
Kuyindida ukuthi kuze kube yimanje abaholi abaningi bezinhlangano ezahlukeneyo basala bekhungathekile ngalesi simo, bese kuba sengathi le nto iyishwa,kanti cha. Lesi simo siyimiphumela yokungaqinisi isandla kulabo abaphambukayo emibandeleni ebekiweyo. Awukwazi ukubabaza umphumela omubi, uyeke imbangela yokunganaki isisusa senkinga. Lokhu kuveza isithombe sokuthi labo abafisa ukubona ubulungiswa, bagcina ngokuma ndawonye bakhande umbimbi, kumbe unqenqema, ukuze bavikele imigomo kanye nothando lwenhlangano, bese kuthi ngakolunye uhlangothi nalabo abangosikhwiliphambana nobhoko, bayaye badlebeleke bathwale amakhanda kanye nemikhaba baxove inkambiso yamaqembu abo.
Kungaba yishwa nxa singafisa ukuba laba bantu babe ndawonye, ngoba umphumela walokho akucaci ukuthi kungaba yini. Nginovalo lokuthi hleze abalungileyo bangagwinya ngabangalungile, kuphethe ngokuqumbeka phansi izinhlangano kanye nemigomo yazo emihle nethandwa kakhulu wuquqaba.
Lesi simo asikwazi ukumane sishabalale ngokwaso,ngisho singathandaza size sikhale izinyembezi impela, kodwa isisombululo sisala kubaholi bezinhlangano ukuba bapheze ukuba ntekenteke ekumeleni iqiniso lokuqondiswa kwezigwegwe, lapho khona kubonakala ukuthi kunamakhosana okuzibeka, asethanda ukuqonela abanye ngemikhuba emibi. Kuhle siwukhuthaze umoya wokuziphatha kahle, kodwa akulona iqiniso ukuthi labo abaziphethe kahle sekumele bahlale ngokuhlukumezeka, bengavikeleki kule migulukudu yezimpisi ephula imigomo nsuku zonke, kumane kucwebe isiziba.
Kubukeka kuzohlala njalo kunale nkinga yobudluthudluthu, bomdonsiswano nxashane abaholi bamaqembu bezoyiziba lena eyabantu abaneziphambeko ezingabekezeleleki. Kafushane nje imidlwembe yiyona eholela kulesi simo samaqembuqembu ezinhlanganweni zemibusazwe.
nguThemba Xolani Zikhali eMbazwana, KwaMhlabuyalingana